China Nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu emepụta na suppliers | Baiyi
:Dị: BY-TF01-TTO; BY-TF01 / 02-TTO-A; BY-TF01 / 02-TTO-B; BY-SF01-TTO (4dị 4)
Njirimara:Standard TTO feeder ike TTO thermal ebi akwụkwọ technology & ọgụgụ isi nri technology, ghọtara akpaaka-nri & kwes-ebi akwụkwọ n'ụzọ zuru okè. Ndị ọrụ nwere ike ịme akwụkwọ na akpa plastik (gụnyere akpa rọba, akara, igbe ndị etinyere wdg) iji bipụta ụbọchị, ihe odide, onyonyo dị mfe, ọkachasị maka koodu mgbanwe, koodu QR na ọtụtụ usoro mbipụta ọdịnaya dị ukwuu. Artistic na ezi ； ọtụtụ-eji nkwakọ, obibi, nkà mmụta ọgwụ, chemical, nri wdg gbara akwụkwọ.
Nri & TTO thermal-ebi akwụkwọ niile na otu usoro ngwaahịa bụ TTO thermal ebi akwụkwọ & ọgụgụ isi nri technology si ọhụrụ mwekota. Ọ ghọtara nri nri & TTO na-ebi akwụkwọ ọkụ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke ma nwee ike ịkwadebe ya na ụdị TT thermal printer. Ọ bụ maka iche iche nke plastic akpa, akwụkwọ, labeelu wdg adụ ihe onwunwe si nzuzo. Adopts rịbọn dị ka ebi akwụkwọ mkpụrụ, sanitary & adaba, echekwa, anụ ahụ odide mara mma. Kpochapụwo “atọ n'ụzọ” imewe mode: 1 ， auto nri ； 2 ， TTO thermal ebi akwụkwọ ； 3 ， collection na hopper ； layout mfe, ọrụ & mmezi mfe, scalability ike. dị ka ngwa chọrọ na ahịa, e nwere ihe anọ na ụdị: 1. Classic oriri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, Nlereanya: BY-TF01-TTO; 2. Standard nri & TTO kwes ebi akwụkwọ niile na otu, Adị A, Nlereanya: BY-TF01 / 02-TTO-A; 3. Standard nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, Typedị B, Nlereanya: BY-TF01 / 02-TTO-B ； 4 ， nkịtị nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, nlereanya: BY-SF01-TTO.
1. "kpochapụwo nri & TTO thermal-ebi akwụkwọ niile na otu ihe nlereanya: BY-TF01-TTO" s igwe ahụ adopts igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ carbon ígwè sere (agba nwere ike ahaziri). otu esemokwu dị ka nri nri, nke nwere akara dị iche iche nke esemokwu na-agbanye eriri yana akwa dị iche iche, nke na-eme ka ọ bụrụ uwe kachasị maka ihe dị iche iche na akpa plastik, ụdị ngwaahịa ahụ nwere ike ịbụ site na 80mm ruo 400mm. Rollzọ usoro mpịakọta kpochapụla na usoro ntinye nke agbakwunyere TTO thermal printer ， nke nwere okpukpu abụọ n'èzí na-ebu eriri eriri, nke na-eme ka ngwaahịa ahụ na-esi na nri nri gaa ebe obibi akwụkwọ na-agba ọsọ. Ma enweghị mpempe akwụkwọ, enweghị mmebi, yana arụmọrụ zuru oke.
2. "Standard nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, Adị A" dabeere na kpochapụwo nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, adopts nwere ọgụgụ isi feeder dị ka udia ngwaọrụ, nke na-ahụ na nri akụkụ ziri ezi. The nnyefe akụkụ adopts pụrụ iche "mpịakọta & eriri" usoro, nke na-eme igwe ọrụ expandability ma e wezụga TTO thermal ebi akwụkwọ. Ọmụmaatụ: ịdebanye aha, inkjet obibi akwụkwọ, laser ngbanwe, OCR nchọpụta, na akpaaka ojuju, na akpaaka collection wdg Integrated na agụụ mmiri ọrụ n'oge nnyefe, ọ nwere ike na-egbo mkpa nke tụnyere iche iche na nkà na ụzụ niile na otu igwe.
3. "ọkọlọtọ nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, Typedị B" nakwa adopts nwere ọgụgụ isi feeder dị ka udia ngwaọrụ. Ihe dị iche na Standard nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu, Adị A na-n'ịkpa dịghị ala nnyefe usoro na ghọtara TTO kwes obibi, nke bụ ihe kasị ọhụrụ na nnwale. Special-eme ebu belt dochie agba agba ala n'okpuru TTO kwes obibi. Yabụ na ọ bụghị naanị kwado ọrụ ọzọ gbatịrị agbatị, kamakwa bulie izi ezi nbipụta nke ọma. Ọnọdụ ọnọdụ dị n'etiti ± 0.2mm. ka ọ dị ugbu a, ọsọ ibi akwụkwọ, nrụpụta obibi na nkwụsi ike niile nwere nnukwu ọganiihu.
4. nkịtị nri & TTO kwes obibi akwụkwọ niile na otu bụ anyị kasị dị mfe & TTO thermal ebi akwụkwọ igwe. Ọ adopts nkịtị esemokwu nri usoro na ike na ala & belt nnyefe usoro, uwe n'ihi na ọtụtụ plastic akpa. Ọrụ mfe & echekwa. Njikwa ya na-ejide otu igwe na otu ọsọ ọsọ ọsọ, Ọ dịghị PLC ma ọ bụ HMI, hapụ ọrụ mmadụ dị mgbagwoju anya, dị mfe, dị mfe na nrụnye; fechaa ahu, adaba maka Mbupu.
1. Kpochapụwo nri & TTO kwes ebi akwụkwọ niile na otu
2. Standard nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu Adị A
3. Standard nri & TTO thermal-ebi akwụkwọ niile na otu Bdị B
4. nkịtị nri & TTO kwes ebi akwụkwọ niile na otu
A. akụkụ: L * W * H = 1350 * 800 * 1230mm
B. Arọ: ihe dị ka 100KG
D. Ike: ihe dị ka 1KW
E. eriri agba ọsọ: 0-50m / min
F. njikwa: PLC + HMI; Ntughari uzo abuo ma obu okpukpu abuo nke DC
H. inye ụkpụrụ: esemokwu esemokwu, nri bọtịnụ
I. nnyefe usoro: ala usoro
J. dị ngwaahịa: iche iche nke akpa, kpọọ, akwụkwọ wdg juu ihe
K. ngwaahịa ha dị: L * W * H = (60-300) * (60-400) * (0.1-1) mm
L. irè obosara ukpụhọde nso: 300mm (ahụ ukpụhọde)
M. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ eserese carbon (agba nwere ike ịhazi ya)
N. echichi usoro: n'ala-kwụụrụ anya-akara
O. nhọrọ nhọrọ: akpaaka nchịkọta, OCR, akpaaka jụrụ.
2. disposable ihu nkpuchi si nri & nnyefe nri nri & TTO thermal ebi akwụkwọ niile na otu Type A
A. akụkụ: L * W * H = 2270 * 760 * 820mm (okwu: ebu eriri obosara 385mm, ogologo: 1200mm)
D. Power: banyere 1.5KW (gụnyere agụụ mmiri ọrụ)
I. usoro nnyefe: ala na eriri
J. dị ngwaahịa: iche iche nke mbukota akpa, kpọọ, akwụkwọ wdg adụ ngwaahịa.
K. dị ngwaahịa ya: L * W * H = (60-300) * (60-380) * (0.1-1) mm
L. irè obosara obosara nso: 300mm (ahụ ukpụhọde)
N. usoro nrụnye: ala-nguzo na offline
O. nhọrọ nhọrọ: ịkọ aha, OCR, ịjụ onwe ya, ịnakọta akpaaka.
A. akụkụ: L * W * H = 2270 * 760 * 820mm (ikwu: ọkọlọtọ ebu eriri obosara 385mm, ogologo 800mm)
I. nnyefe: enweghị ala
L. Irè obosara irè: 300mm (aka ukpụhọde)
N. usoro nrụnye: ala-iguzo na offline
3. 4, Nkịtị nri & TTO kwes-ebi akwụkwọ niile na otu
A. akụkụ: L * W * H = 1525 * 600 * 760mm (okwu: ọkọlọtọ ebu eriri obosara 330mm, ogologo 600mm)
B. aro: ihe dị ka 100KG
C. voltaji: 220VAC 50 / 60HZ.
F. usoro nchịkwa: otu igwe na otu ọsọ ọsọ ọsọ
K. dị ngwaahịa ya: L * W * H == (60-300) * (60-330) * (0.1-1) mm
L. irè obosara obosara nso: 200mm (ahụ ukpụhọde)
M. igwe ahụ: igwe anaghị agba nchara
N. usoro nrụnye: nkwụnye ala na offline.
O. ọrụ nhọrọ: mba.
Nke gara aga: tebụl-top feeder
Osote: usoro nke ọgụgụ isi nri n'elu ikpo okwu